Buka: Umqondisi we-'Raw 'Uthola Elemental Nge-trailer entsha' yeTitane '
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Buka: Umqondisi we-'Raw 'Uthola Elemental Nge-trailer entsha' yeTitane '
by UKelly McNeely June 21, 2021
Kunenqola entsha ekhishelwe ifilimu elandelayo evela kumqali wezindaba waseFrance uJulia Ducournau (Raw), futhi kubukeka ... kukhulu kakhulu. Isihloko UTitane, okuwukuphela kwencazelo enikeziwe incazelo yegama uqobo lwayo:
I-TITANE: Insimbi emelana kakhulu nokushisa nokugqwala, enama-alloys amandla aqine kakhulu, ajwayele ukusetshenziswa kuma-prostheses ezokwelapha ngenxa yokuphikisana kwayo.
Lokho kusho, uma wenza ukumba kancane ungathola imininingwane elinganiselwe kakhulu; kuthiwa le filimu “ilandela insizwa ezisholo ukuthi yingane elahlekile isikhathi eside futhi ingumnakekeli wemoto, idolobha lakubo elithathwe ngamacala okubulala asabekayo”. Vele, ungakuthatha lokho ngohlamvu lukasawoti kuze kukhishwe isifinyezo esisemthethweni.
UTitane kubhalwe futhi kwaqondiswa nguDucournau, igama elisha elijabulisayo ku-horrorsphere. Ifilimu yakhe yokuqala, Raw, izithameli ezihehayo nabagxeki ngokufanayo (futhi yamzuzela indawo ohlwini lwethu siqu lukaBri Spieldenner Abaqondisi abaphezulu abayishumi abaphezulu nabasezingeni eliphezulu abaphezulu). Kule filimu, umfundi wezilwane we-vegan uthola isidingo esikhulayo sokudla inyama; kungukuthatha inkanuko, ukuthatha abantu badle inganekwane “yobudala”.
Njengengane yodokotela ababili, umsebenzi kaDucournau ubukeka kahle, unodlame, futhi awuhlaza, onokwesabisa komzimba okukholisayo - okukholisa kakhulu, ukuthi amanye amalungu ezilaleli aquleka ngesikhathi sokukhonjiswa eToronto International Film Festival. UTitane Kubukeka sengathi akunjalo - i-trailer ine-rough, edge ebukhali, futhi nami ngokwami ​​ngijabule kakhulu ukujabula ukubona ukuthi sikulindeleni.
Kudlala u-Agathe Rousselle noVincent Lindon, UTitane izobona umdlalo wayo wokuqala womhlaba e-Cannes Film Festival ngoJulayi 2021, lapho iDucournau izobe incintisana khona noPalme d'Or oyifunayo.
Ungahlola i-trailer engezansi!
Inyanga Yokuziqhenya Esabekayo: UKevin Williamson kanye neHorror Renaissance yamaLate 1990s
'I-Wolf Creek 3' Ikhethwe yi-Altitude Film Sales ye-Cannes Virtual Market